युवालाई आकर्षित गर्न अनुदान
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा युवालाई पशुपालनको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न चार करोड पाँच लाख २१ हजार अनुदान वितरण गरेको छ । ल्लिा पशुसेवा कार्यालयले दुई करोड ४१ लाख २१ हजार र बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालय हरिहरभवनले एक करोड ६४ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। दूध र मासु उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी[Read More…]
by GreenKhabar —	August 15, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
राष्ट्रिय चिया नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसान, व्यवसायी तथा उद्यमी मर्कामा परेका छन् । चिया नीतिमा राम्रा विषयवस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा चिया क्षेत्र नाजुक स्थितिमा पुगेको छ । ‘वि.सं.२०५७ सालमा राष्ट्रिय चिया नीति आएको थियो जसमा किसान तथा व्यवसायमुखी काम गर्ने र छोटो समयमै चियालाई अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउने लगायतका बुँदाहरू समेटिका छन् । नीतिमा किसान तथा उद्यमीलाई प्रोत्साहित[Read More…]
खोटाङ, उन्नत जातको बीउबाट मकै उत्पादन दोब्बर वृद्घि भएपछि किसान उत्साहित बनेका छन् । उनीहरु सो बीउप्रति आकर्षित भएका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका बडहरे, च्यास्मिटार, दुर्छिम, बाहुनीडाँडाका किसानले मनोकामना–३ जातको मकैको बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादनमा स्थानीय जातको भन्दा दोब्बरले बृद्धि भएको छ । स्थानीय जातको भन्दा ठूलो बोट भएको मनोकामना–३ जातको मकैमा घोगा पनि ठूलै लाग्ने गरको बडहरेकी गंगादेवी[Read More…]
by GreenKhabar —	August 9, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, सफलताको कथा, हरित उद्यम, हरित खबर
तीन अर्बको कृषिजन्य र जडीबुटी भारत निर्यात, सबैभन्दा बढी अलैँची निर्यात
गत आर्थिक वर्ष भारततर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कृषिजन्य पदार्थ तथा जडीबुटी भारततर्फ निर्यात भएको छ । विराटनगर नाका भएर गत आवमा तीन अर्ब २६ करोड १२ लाख २४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको कृषिजन्य र जडीबुटी निर्यात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले जनाएको हो । सोमध्ये सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ६६ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको तीन हजार[Read More…]
by GreenKhabar —	August 9, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, हरित उद्यम, हरित खबर
रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ना (नार्क)को माटो अनुन्धान महाशाखाले देशभरका ५२ जिल्लाको माटोमा गरेको अनुसन्धानमा माटोमा अम्लियपनाको मात्रा बढ्दै गएको पाइएको हो । तराईको २० वटा जिल्ला र पहाडका ३२ वटा जिल्लाको नमूना संकलन गरी अनुसन्धान गर्दा माटो तटस्थ अवस्थामा नभएको पाइएको हो । माटो तटस्थ अवस्थामा हुँदा मात्रै राम्रो उत्पादन हुन्छ।[Read More…]
जेसन जी गोल्डम्यान लन्डन– सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’ भनिन्छ हात सफा भए कीटाणू फैलिँदैनन्। खानेकुरा बेच्नेहरूले अझ बढी हात सफा राख्नुपर्छ। तर, यथार्थमा हुन्छ के भने हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि हातबाट ब्याक्टेरिया÷कीटाणू पूर्णतया समाप्त हुँदैनन् वा[Read More…]
by GreenKhabar —	August 6, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित खबर
वृक्ष गिफ्ट !
घोराही १४ की लक्ष्मी केसीले छोरा युजेन र छोरी आयुष्कालाई उपहारस्वरूप एक/एक बिरुवा रोपिदिइन्। घोराहीका देव यादवले वैवाहिक उत्सवका अवसरमा श्रीमती आरएल जोशीलाई उपहारस्वरूप एक बिरुवा रोपे। मावि नारायणपुरका प्रधानाध्यापक टोपबहादुर केसीले स्वर्गीय आमा पञ्चकली केसीको स्मृतिमा त्यसै गरे। घोराहीमा प्रियजनलाई उपहारस्वरूप केही सामान किनेर दिनुको साटो आफन्तको नाममा खर्चिलो दान दातव्यका ठाउँमा बिरुवा रोप्ने चलन निकै लोकप्रिय बन्दै गएको[Read More…]
by GreenKhabar —	August 3, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
आर्थिक सम्बृद्धिमा स्थानिय सरकारको दायित्व
सुरेन्द्र पाण्डे लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी थियो । नेकपा (एमाले) सहितको अनवरत प्रयासले स्थानीय तहको निर्वाचन बीस बर्ष पछि सम्पन्न भएकोछ । ७४४ स्थान मध्ये ६१७ स्थानमा दूई चरणमा सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) २७८ स्थानमा प्रमुख र ३१२ स्थानमा उपप्रमुखमा विजयी भई पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको छ । बाँकी १२७ स्थानमा[Read More…]
by GreenKhabar —	August 1, 2017 —	0 comments —	आलेख/विचार, मूलपेज
विश्वमा किन रुद्राक्ष् यति धेरै महँगो मुल्यमा बिक्रि हुनुछ ? नेपालमा त झन् यसको कालो बजारी नै चल्न थालेको छ ! वास्तवमा रुद्राक्ष् बाट के फाईदा हुने भएर मानिसहरु यसरि महँगो मुल्यमा किन्छन ? पौराणिक मान्यता अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिवको तेस्रो नेत्र द्वारा उत्पादित भएको हो यसले हामीलाई हाम्रो समस्या संग लड्न क्षमता प्रदान गर्दछ ! भनिन्छ रुद्राक्ष जति सानो[Read More…]
नेपालका जडीबुटीले निको नहुने कुनै रोग छैन : क्यान्सरदेखि हेपटाइटिससम्म
नेपाल सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत ५४ वर्षीय विश्वनाथ रेग्मी प्रोस्टेटग्लान्ड बढ्ने समस्याले पीडित भए । दोस्रो चरणमा नै पुगिसकेको भन्दै उनलाई चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी खुर्केर फाल्नुपर्ने सुझाव दिए तर शल्यक्रियाको विकल्प खोजिरएका उनी आयुर्वेदिक उपचार परामर्श केन्द्रमा पुगे । उक्त केन्द्रका कृष्णप्रसाद पोखरेलको जडीबुटी औषधि खाएपछि आज उनलाई निकै राम्रो भएको छ । उनी भन्छन्, ‘पिसाबमा सङ्क्रमण हुने, ज्वरो आउने[Read More…]